Raadinta Emailka iyo Halbeegyada ay Tahay Inaad La Socoto
10 Heerarka E-Socodka E-mayl ee ah Inaad Kormeerto
Sabti, Febraayo 20, 2016 Axad, Janaayo 15, 2017 Douglas Karr
Markaad eegto ololeyaasha emaylkaaga, waxaa jira tiro cabbirro ah oo aad u baahan tahay inaad diiradda saarto si aad u horumariso waxqabadka suuqgeynta emailkaaga guud. Dabeecadaha emaylka iyo teknoolojiyada ayaa isbeddelay waqti ka dib - markaa hubi inaad cusbooneysiiso habka aad ula socoto waxqabadka emaylkaaga. Waagii hore, waxaan sidoo kale la wadaagnay qaar ka mid ah qaaciidooyinka ka dambeeya cabbiraadaha emaylka ee muhiimka ah.
Meelaynta Sanduuqa - iska ilaalinta faylalka SPAM iyo miirayaasha Junk waa in lala socdaa haddii aad haysato tiro macmiil ah (100k +). Sumcada dirahaaga, hadal ku adeegsiga khadadkaaga maadada iyo farriinta jirka… dhammaantood waa jaangooyooyin muhiim ah oo lagula soconayo kuwa aan sida caadiga ah bixinin bixiyaha suuqgeynta iimaylkaaga. Email-bixiyeyaasha adeegga kormeera samatabbixin, ma ahan meelaynta sanduuqa. Si kale haddii loo dhigo, emaylladaada waa la geyn karaa… laakiin si toos ah ayaa loogu ridi karaa qashinka. Waxaad ubaahantahay madal sida 250ok si loola socdo meelaynta sanduuqaaga.
Sumcad Sumadeed - Meel gelinta sanduuqa oo ay weheliso sumcadda soo dirahaaga. Ma waxay ku jiraan liiska madow? Diiwaangelintooda ma loo habeeyay si habboon Bixiyeyaasha Adeegga Internetka (ISPs) si ay ula xiriiraan una xaqiijiyaan inay u idman yihiin inay soo diraan emaylkaaga? Kuwani waa dhibaatooyin inta badan u baahan a samatabbixin la taliye kaa caawinaya inaad dejiso oo aad maamusho adeegahaaga ama aad xaqiijiso adeegga dhinac saddexaad ee aad ka dirayso. Haddii aad isticmaaleyso dhinac saddexaad, waxay lahaan karaan sumcad xun oo emaylkaaga toos ugu hela galka qashinka ama xitaa gebi ahaanba la xannibo. Dadka qaarkiis waxay u adeegsadaan SenderScore tan, laakiin ISP-yada ma kormeeraan SenderScore-kasta ISP waxay leedahay qaab u gaar ah oo lagula socdo sumcaddaada.
Liiska haynta - waxaa la sheegay in illaa 30% liistada ay beddeli karaan cinwaanada emaylka sannad gudihiis! Taasi waxay ka dhigan tahay si liiskaagu u sii socdo inuu sii kordhayo, waa inaad ilaalisaa oo aad kobcisaa liiskaaga iyo sidoo kale inaad heysato inta kale ee macaamiishaada ah inay caafimaad ahaadaan. Immisa macmiil ayaa lumaya usbuucii imisa macmiil oo cusub ayaad helaysaa? Halka heerarka kabashada halkii olole ayaa caadi ahaan la bixiyaa, Waxaan la yaabanahay in liiska haynta guud aysan ahayn diiradda koowaad ee bixiyeyaasha adeegga iimaylka! Liiska haynta waa halbeeg muhiim ah oo lagu aqoonsado tayada waxyaabaha emayl ee aad qaybinayso.
Warbixinnada spam - Immisa qof oo macaamiil ah ayaa ku soo warramey iimaylkaaga qashin? Waxaan rajeynayaa inaysan jirin - laakiin haddii aad leedahay wax ka badan dhowr kasta oo aad dirto waxaad u baahan tahay inaad ka walaacdo halka aad ka helayso macaamiishan iyo ku habboonaanta waxyaabaha aad u direyso. Laga yaabee inaad dirto emayl aad u tiro badan, way iib yihiin, ama waxaad iibsaneysaa liisasyo… kuwan oo dhami waxay kuu horseedi karaan cabashooyin badan oo SPAM ah oo aakhirka kaa horjoogsan kara inaad wada dirto.
Fur Rate - Furan ayaa lagula socdaa iyadoo pixel-ka raadraaca lagu daro emayl kasta oo la diro. Maaddaama macaamiil badan oo emayl ah ay xayiraan sawirrada, maskaxda ku hay in heerkaaga furan ee runta ah had iyo jeer uu aad uga sarrayn doono heerka furan ee dhabta ah ee aad ku arkayso emaylkaaga Analytics. Isbedelada sicirka furan ayaa muhiim ah in la daawado maxaa yeelay waxay tilmaamayaan sida wanaagsan ee aad u qoreyso khadadka maadada iyo sida qiimahaagu u yahay macaamiisha.
Guji Rate - Maxaad ka rabtaa dadku inay ku sameeyaan emaylladaada? Booqashada dib ugu noqoshada boggaaga ayaa (rajo leh) istaraatiijiyad aasaasi ah ee ololeyaasha suuqgeynta iimaylkaaga. Hubinta inaad ku leedahay wicitaanno-ficillo xoog leh e-mayladaada oo aad u dhiirrigeliso xiriiriyeyaasha si wax ku ool ah waa in lagu daraa naqshadaha iyo istiraatiijiyadaha wax ka qabashada waxyaabaha.
Guji si aad u furto heerka - (CTO ama CTOR) Dadkii furay emailkaaga, muxuu ahaa heerka u-guuritaanka? Waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo la qaadanayo tirada macaamiisha gaarka ah ee guji ololaha oo loo qaybiyo tirada gaarka ah ee macaamiisha furay emailka. Tani waa halbeeg muhiim ah maxaa yeelay waxay cabiraysaa la shaqeynta olole kasta.
Heerka Is-beddelka - Marka waxaad ka heshay iyaga inay guji, runti ma beddeleen? Raadinta beddelka ayaa ah muuqaal ka mid ah bixiyeyaasha adeegga emayl badan oo aan looga faa'iideysan sidii la rabay. Waxay caadi ahaan ubaahantahay gabal koodh ah boggaaga xaqiijinta ee diiwaangelinta, soo dejinta, ama iibsashada. Raadinta beddelaaddu waxay macluumaadka u gudbineysaa emaylkaaga Analytics inaad dhab ahaantii dhammaystirtay sameynta wicitaan-ficil ee lagu dhiirrigeliyey emaylka gudihiisa.
Qiimaha Furan ee Mobilada - Tani aad ayey u weyn tahay maalmahan… B2B badankood e-maylladaada ayaa laga furaa aaladda moobaylka. Tan macnaheedu waa inaad fiiro gaar ah u leedahay sida ay tahay khadadka maadada ayaa la dhisay oo hubi inaad isticmaalayso naqshadaha emaylka ee jawaabta leh in si sax ah loo daawado oo loo hagaajiyo guud ahaan heerarka furan iyo guji-ilaa.
Qiimaha Amarka Celceliska - (AOV) Ugu dambeyntiina, raadinta cinwaanka emaylka ee rukunka, iyada oo loo marayo kobcinta, illaa loo beddelashada ayaa muhiim u ah maaddaama aad cabbireyso waxqabadka ololayaasha emaylkaaga. In kasta oo sicirka beddelka uu sii ahaan doono mid xoogaa iswaafaqsan, xaddiga macaamiisha lacagta ku qaatay dhab ahaantii way kala duwanaan karaan xoogaa.
Tags: AOVcelceliska qiimaha dalabkaliiska madowheerka cigtaheerka-guji-u-furanheerka beddelkactokoronto-dhaliyesamatabbixinemaylka liiska madowcabirrada emaylkasumcadda emailkaboqolkiiba sanduuqahaynta liiskaheerka furansumcadda dirahacabashooyinka spamwarbixinnada spam
Diyaarinta Macluumaadka Isku Darka: Si Fudud u Hel, Nadiifi una Diyaari Macluumaadkaaga CRM
Istaraatiijiyadeena Ikhtiyaariga ah ee Email-ka ah ee Ugu Fiican abid